Tsy mahalia lalana amin’izao… | NewsMada
Tsy mahalia lalana amin’izao…
Par Taratra sur 12/03/2018
Efa ao anatin’ny tanteraka ary efa mandeha aza izao ny hetsika mialoha ny tena fampielezan-kevitra. Samy manao izay efany sy afany… Tsy mbola misy lalàna manohitra an’izany, afa-tsy ny hoe fampielezan-kevitra mivantana sy ankitsirano, angaha.
Amin’izany rehetra izany, tsy ilaozan’izay tsy mahazaka fa te hanjakazaka irery sy te hanao ny danin’ny kibony. Eny, na tsy takona afenina izao aza fa tsy amin’ny rariny sy hitsiny ny izay ataony sy lazaina, tsy amin’ny fahamarinana sy fahitsiana.
Tsy inona tsy inona fa ny amin’ny fampiasana sy fanararaotana fahefam-panjakana, volam-panjakana, fitaovam-panjakana, olom-panjakana… Nefa efa raharahan’ny antoko politika sy ny fiatrehana ny fifidianana izao aza no atao.
Tsy vitan’izany, misy ny fanerena mivantana ny mpiasam-panjakana sy ny mpianatry ny sekolim-panjakana hanamaro isa ny famoriam-bahoaka. Misy ny fahatsapan-tena fa efa aloam-bahoaka? Na anaran-tsy levona toy ny vanja lena sisa…
Eo ihany izay, na tsy araka ny tokony ho izy aza. Ny zava-doza? Efa tsy afaka ny tena amin’ny fakana ny fom-bahoaka, na eo aza ny fisehoana sy ny fampandriana adrisa: sakanana sy potehina izay manelingelina sy ahina hisongona ny tena.
Izany moa no inona? Mbola vao aty am-piaingana, miseholany sahady ny antsojay, tsy fanarahan-dalàna, amboletra, jadona… Izany no hoe tsy misy paipaika sy kajikajy politika… maloto? Na ho fifidianana madio, milamina, hoeken’ny rehetra…
Tsy mahagaga raha misy hatrany ny fanahiana korontana sy krizy; eny, na hosoka sy hala-bato aza. Efa niara-nahita ny nafitsoky ny fitondrana tamin’ny fifidianana kaominaly sy senatorialy, taona 2015. Mora hadino? Hita ny atao…
Raha hiverina ho vahaolana àry ny fifidianana: olana ho azy ho an’ny vahoaka sy ny firenena noho ny afitsoky ny mpitondra mbamin’izay mpiara-dia aminy ao ambadika, na teratany na vahiny. Hiverina indray ve izany amin’izao? Fieritreritra…
Tsy mahalia lalana irery amin’izao raha tsy misy paipaika sy kajikajy ratsy, hany ka manakana ny hafa tsy handeha?